Laydhka Laydhka iyo Laydhka Gudaha ee Korantada oo Magaceeda Cusub iyo La Cusbooneysiiyay Maaddada 16 | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Marmara34 IstanbulMagaca cusub iyo casriyeynta la cusbooneysiiyay Calaamadaha Nalalka Korontada iyo Koronto Qalabka Korontada 16
05 / 02 / 2016 34 Istanbul, hawlaha, GUUD, Jadwalka Nidaamka Tareenka, TURKEY
Magaca cusub iyo content cusboonaaday la Laydhka LED iyo Gudaha korontada goobaha Exhibition 16: warshadaha Laydhka si çağatlat LED beerta technology kuwaas oo alaabta ee Turkey iyo dhibic kulanka hal heerka caalami ee LED ee deegaanka, Daah iyo Gudaha rakiban korontada Exhibition, 06-09 la Dhuxul fikradda cusub iyo content Oktoobar 2016 taariikhda si ay ula kulmaan dhinacyada xiisaha leh. Sida ka duwan sano 2015 ku lug leh waxyaabaha LED, 6-9 LED oo lagu qaban doono October 2016, Daah bandhig wax soo saarka iyo Gudaha korontada goobaha Exhibition, ayaa sidoo kale laga soo bilaabo guddiga korontada soo socda dhismaha ilaa ay ka gaarayso iftiiminta lagu daro oo dhan lagu rakibo gudaha waxsoosaarka ayaa la ballaariyay si loogu daro.
waxqabadka Sare, ay sabab u tahay sifooyinka sida hufnaanta iyo dareenka deegaanka, gaar ahaan Midowga Yurub (EU) Kokes ku waxaa loo isticmaalaa in tiro balaadhan oo ah mashruuc diinta nalalka gudaha wadamada horumaray, gaar ahaan, ayaa bilaabay qaadashada meeshoodii waa sii kordheysa ee ay xafiiltamaan jir incandescent iyo halogeen laambadihii. Sababtoo ah 'normalization' ee LED-yada adigoo ka tagaya mawqifkooda ay ku leeyihiin suuqa iftiinka, waxaanu doorbidnaa inaan ugu yeerno qaybta iftiinka quruxda ee loo yaqaan "light lighting" bedelka nalalka LED. Sababtoo ah sida Ururka Cimilada Marmara; Waxaan aamminsannahay in aanu joogno bilowga maalmaha marka la yiraahdo iftiin macnaheedu waa LED.
2015-6 waxaa lagu qaban doonaa 9 bisha Oktoobar.Qodobka Nuclearka, Nalalka Korontada iyo Farsamaynta Korontada Ku-xirnaanta, ka sokow badeecadaha leh LEDs, loo isticmaalo gaadiidka, saldhigyada, fiilooyinka korontada, fiyuusyada iyo wixii la mid ah. ayaa la ballaariyay si loogu daro dhamaan qalabka rakibaadda gudaha.
Waad ku mahadsantahay ballaarintan soo bandhigga sheyga, Bandhigga Horumarinta Marmara, Led, Nalalka iyo Nabadgelyada Korontada ee Korontada ku shaqeeya iyada oo la kordhinayo ujeedooyinka qaybaha; ma aha oo keliya urur kaas oo shirkadaha LED-ka ee heerarka sarreeya ay lug ku leeyihiin, laakiin sidoo kale waxay doonayaan inay samaystaan ​​urur kaas oo qayb ka ah dhammaan shirkadaha LED iyo korontada oo ka bilaabma saldhigga. Iyadoo socdaalkan, Marmara Fuarcılık wuxuu abaabulay LED, Nalalka Korontada iyo Koronto Qalabka Korontada laga soo bilaabo tan 2007; ujeedadeedu tahay inuu ku daro saldhigga qaybta ee hay'adda dhexdeeda.
Xumeeyayna Fair Organization, International keentay in lagu qaban doono sannadka 2016 ah, Daah iyo Gudaha korontada waxbarasho rakiban Exhibition bilaabay samaynta kala soocin gudaha iyo kuwa caalamiga ah iyo horumariyo ururada la xiriira, publications warshadaha, iyadoo carwooyinka la mid dibadda bilaabeen inay heshiisyo iskaashi. heshiisyada noocan ah, iyo sidoo kale sii wado waxbarashada ee shirweynaha kooxda beerta xumeeyayna Fair lagu qabtay dalka, symposiums iyo siminaaro ka dhacaya kulan halkaas oo kulamo ay ku salaysan waaxaha, sida kordhinta ee ganacsatada in kooxda mashruuca aqoon iyo waayo-aragnimo waxaa qaadashada jihada tallaabooyinka lagama maarmaanka ah.
La xiriir: Aysu Ceren Ozaydin
Sarkaalka Xiriirka iyo Suuq-geynta Shirkadda
(+ 90) 212 503 32 32 / pr@marmarafuar.com.tr
Goobta Kulan ee warshadaha ku shaqeeya Elektaroonigga oo ay ku cusbooneysiinayaan Maaddada Rich, 5.…
Ogeysiinta Qaadashada: Nalalka iyo qalabka korontada ee la iibsado
Wasaaradda iyo Degmadda Ankara ee Metro waxay sheegaysaa waxyaabo kala duwan